भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकका भूकम्प पीडित त्रिपालको छाना भएको टहरोमै ! – इन्सेक
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकका भूकम्प पीडित त्रिपालको छाना भएको टहरोमै !
गोरखा ०७६ जेठ २१ गते
भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-१ बारपाक स्थित दलित बस्तीका २५ घरधुरी भने टहरोमै रहेका छन् । छिमेकी टोलमा घर पुनर्निर्माण सकिँदा पनि सो बस्तीका दलित परिवारले घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् ।
भूकम्प केन्द्रबिन्दु बस्तीका सबै घरधुरी लाभग्राही सूचीमा पनि सूचीकृत छन् । 'चैत लागेपछि हावाहुरीले छाना उडाउने समस्या थपिएको छ ।'-स्थानीय सरिता बिकले भनिन्-'हिउँद लाग्यो शीत ओछ्यानमा चुहिएला भन्ने पीर, बर्खा लाग्यो घर भित्र भल पस्ला भन्ने पीर !'
सरिता जस्तै बारपाक प्रवेशद्वारमा रहेका २५ घरधुरीको समस्या उस्तै छ । उनीहरूको छानो आधा जस्ता र आधा च्यातिएको त्रिपालले छाइएको छ ।
चार हिउँद र चार बर्खा टहरोमा बसेका यहाँका पीडित नयाँ घर बनाउन अन्यौल हुँदा कष्टकर बसाई लम्बिएको बताउँछन् । यहाँका अधिकांश दलित समुदाय मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छन् ।
रकम अभावमा जग्गा किनेर घर बनाउन नसकिएको स्थानीय कान्छा कामीले बताए । 'पुख्र्यौली पेसा आरन हो । सबै गरिब हौ' । आरनमा भाँडा बनाएर आएको पैसाले खान बल्लतल्ल पुग्छ ।'-उनले भने ।
उनीहरू बस्दै आएको बस्ती २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि सुरक्षित स्थानको खोजिमा थातथलो छाडेर अहिले कृषि, जलाधार र पशु कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका छन् ।
दलित बस्तीको करिब सात रोपनी जग्गा भूकम्पले धाँजा फाटेको छ । पुरानो बस्ती बस्नका लागि अयोग्य रहेको प्राविधिकहरूले बताएका छन् ।
'पुरानै बस्तीमा फर्कनै मन छैन । जमीन सबै चिरा परेका छन् ।'-स्थानीय उत्तम बिकले भने । माथि सरेर घर बनाए रातमा निन्द्रा पनि पर्दैन । बरू यहाँ त पहिरोको डर पनि छैन । मनमा आनन्द त छ ।'
सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएको पाँच घर पुरानै गाउँमा फर्किएका छन् । 'सिमैमा बस्न खोजेका होइनौ, माथिको जग्गासँग साट्ने भनेका हौँ । माथि बस्नेलाई माथिकै जग्गा दिए हुन्छ । तल बस्नेलाई तलकै जग्गा दिए हुन्छ ।'-बिकले भने ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका सरकारी कार्यालय आफ्ना मागप्रति सकरात्मक रहेपनि स्थानीय स्तरबाट बसाईका लागि पहल नभएको उनको आरोप छ । अहिले बस्दै आएको जग्गामा घर बनाउन पाउनुपर्ने यहाँका २५ घरपरिवारको माग छ ।
'कोही थातथलो छाड्दिन भन्ने छन् । कोही छाड्छु भन्ने छन् ।'-वडा अध्यक्ष रोशन बिकले भने-'पहिले त सङ्ग्राहालय सँग साट्ने भनेको हो । सङ्ग्राहालय बनाउने भनेको ठाउँमा घर बनेपछि जोखिम भन्न पनि मिलेन ।'
सबै बारपाकका स्थानीयले उपभोग गर्ने जग्गा केही घरधुरीका लागि दिने विषयमा अन्यौल भएको उनले बताए ।